EM Soft Label - China EM Soft Label mpamatsy, Factory - Misongadina
Home » Solutions » Vokatra EAS » Label malefaka EAS
Description: Azo alaina ao amin'ny METO, sy ny rafitra EM hafa
lafiny: 1cm-misy halavany
Material: Vy sy kobalta
Parameter teknika ho an'ny 16.5cm EM Strip
Manitatra 9.5mm amin'ny lafiny roa
Sakany: 4mm ± 0.1mm
Dimy Chip anatiny: sakany ： 1.5mm ± 0.01mm
Fitaovana andriamby vaovao mifototra amin'ny kobalt dia mahatonga azy io tsy ho harafesina velively, mameno tsara sy mora foana, manaparitaka tanteraka, milamina tsara ary tsy hahatafavoaka amin'ny fampiasana matetika ny andriamby andriamby.
Hatevina ho an'ny puce fotsiny: ≤ 0.26mm (tsy misy ny sarimihetsika famoahana ny tampony)
Ny puce magnetika mitanjaka dia eo afovoan'ny andriamby andriamby.
EM strip mampiasa lakaoly misy lafiny roa. Tsy ilaina ny miborosy borosy na mampiasa kasety adhesive hafa rehefa miraikitra amin'ny boky. Ny viscosity lakaoly matanjaka dia mahatonga azy io tsy ho mora rovitra sy lavo. Ny glu vita amin'ny tontolo iainana dia tsy mampidi-doza amin'ny fahasalamana sy ny taratasy.
Ny tarika maivana amin'ny EM dia mifanaraka amin'ny ravina degaussing. Ary ny elanelana misy eo anelanelan'ny puce tsirairay dia mitovy. Izy io dia manana fampisehoana marin-toerana amin'ny magnetizing sy degaussing. Ny chip degaussing dia vita amin'ny fitaovana nafarana.
Ny tadin'ny halavan'ny ultrathin dia manasarotra ny fahitana azy ao amin'ireo boky sy gazety.
Ny sosona taratasy pulp fotsy iray hafa miafina ao anaty tsipika dia mahatonga ilay tsipika tsy ho mora hita na dia misy olona mandrovitra ilay boky aza, izay mampitombo ny saro-takarina.
10. Ny akora tsy misy phenyl ate, ka tsy manimba ny vatan'olombelona.
11. Ny lakaoly mucilage dia vita amin'ny fitaovana tsy miankina amin'ny tontolo iainana. Tena loko EM maitso izy io ary tsy hiteraka fikitikitihana sy mavo ny taratasy;
12. Azo haverina amin'ny fotoana tsy voafetra izy io. Mba hampihenana ny fampandrenesana diso dia hatrany amin'ny 100% hatrany ny famantarana ny soritra EM;
13. Ny ampahany manontolo amin'ny EM dia malefaka. Raha miondrika ilay tsipika, dia tsy hiteraka fikitikitihana sy fianjeran-java-manidina ary fepetra hafa.
14. Ny ravina deactivation an'ny EM strip dia mihoatra ny 10.
15. EM strip dia nekena ny fanamarinana ROHS ary tsy misy akora manimba ho an'ny vatan'olombelona.